Luke Shaw Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Ole Gunnar Solskjaer Uu U Sheegay Ciyaartoyda Manchester United Guul-darradii Aston Villa Kaddib - Gool24.Net
Luke Shaw Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Ole Gunnar Solskjaer Uu U Sheegay Ciyaartoyda Manchester United Guul-darradii Aston Villa Kaddib
September 14, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Difaaca bidix ee Manchester United ee Luke Shaw ayaa shaaciyey waxyaabihihii uu tababare Ole Gunnar Solskjaer u sheegay ciyaartoyda Manchester United kaddib kulankii saaxiibtinimo ee ay guul-darradu kasoo gaadhay ee Aston Villa.
United ayaa kulankii saaxiibtinimo ee Sabtidii ay la ciyaartay Aston Villa waxa lagag abadiyey 1-0, iyadoo ciyaartoyda ay ka midka yihiin Luke Shaw, Daniel James iyo Donny van de Beek ay ciyaar wanaagsan soo bandhigeen. Laakiin tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaartoyda kooxdiisa dhaliilo ugu jeediyey guul-darrada soo gaadhay xilli ay tododbaadka dambe kulankooda ugu horreeya ee Premier Leage la ciyaari doonaan Crystal Palace.
Luke Shaw ayaa warbaahinta u sheegay qaabkii uu tababare Solskjaer ugala hadlay ciyaartoyda kooxdiisa guul-darradaas, waxaanu yidhi: “In badan ayaanu dhibaatoonay mararkaas, marka aanu fursado abuurno laakiin mararka qaarkood aanaan shabaqa soo taabanin.
“Tababaruhu dhab ahaantii ciyaartoyda wuu kala hadlay taas, waxaanu tababarka nagu siiyey tilmmaamo maadaama uu khibrad u leeyahay (gool dhalinta.)”
Shaw waxa uu sheegay in ciyaartoyda kooxdiisu ay iskugu jiraan kuwo da’yar oo wanaagsan iyo laacibiin khibrad leh oo diyaar u ah kulanka Crystal Palace, waxaanu yidhi: “Waxaanu haysanaa ciyaartooyo badan oo ay ku jiraan laacibiin da’yar ah oo xataa aan la tababaranin kooxda koowaad balse fursadahooda qaadanaya. Waxa aanu rajaynaynaa in aanu diyaar u noqon doono kulanka Palace.”
Manchester United oo xili ciyaareedkii hore ku dhamaysatay kaalinta saddexaad, waxay isku diyaarinaysaa inay horyaalka kula loollanto Man City iyo Liverpool xili ciyaareedkan, iyagoo raadinaya saxeexyo cusub oo tamar iyo tayo ba kusoo kordhiya.
Illaa hadda waxay Red Devils lasoo saxeexatay kubbad-sameeyaha reer Netherlands ee Donny van de Beek oo ay Ajax kala soo wareegeen, waxaanay raadinayeen dhawr ciyaartoy oo kale oo uu ugu muhiimsan yahay Jadon Sancho oo hadda quus ay ka taagan yihiin.
Gareth Bale iyo Sergio Reguilon oo labadooduba Real Madrid u ciyaara ayaa iyagana lala xidhiidhinayaa Manchester United.